Otu esi eme njem na North Korea | Akụkọ njem
Mariela Carril | | Atụmatụ, North Korea
Enwere mba kọmunist ole na ole n'ime ụwa ma otu n'ime ha bụ North Korea. Ajụjụ bụ, enwere m ike ịga nlegharị anya ebe ahụ? Ọ bụghị obodo mepere emepe maka njem nlegharị anya mana n'agbanyeghị nke ahụ, enwere ike ileta.
Ị nwere mmasị imepe mpio a n'oge gara aga? Ka ọ bụ ụwa yiri ya? Nke bụ eziokwu bụ na ọ nwere ike bụrụ ahụmịhe a na -agaghị echefu echefu. Ka anyị hụ mgbe ahụ kedu ka ị ga -esi mee njem na North Korea, usoro a ga -eso na ihe enwere ike ime ebe ahụ.
2 Njem na North Korea
Democratic People's Republic of Korea nọ na ọwụwa anyanwụ Asia ọ bụkwa akụkụ ugwu nke peninsula Korea. Nwere ókè na China na Russia na n'ezie na South Korea, Mpaghara ngosipụ site.
Mpaghara Korea dị n'aka ndị Japan site na 1910 ruo na njedebe nke Agha IIwa nke Abụọ (N'ihi ya, ndị Korea ahụghị ndị Japan n'anya nke ukwuu), mana mgbe esemokwu ahụ gasịrị, e kewara ya ụzọ abụọ.
Ndị agha Soviet Union nọ n'akụkụ nke ọzọ ndị agha United States. Mkparịta ụka niile maka ijikọ obodo a dara, ya mere, nan 1948, a mụrụ ọchịchị abụọ, Mbụ Republic of Korea (na ndịda), na Democratic People's Republic of Korea, na ugwu.
North Korea bụ steeti socialist, ya na òtù nzuzo nke ụdị onye ndu dịka ọ na -adị n'oge ndị ọzọ. Ọ bụ nwoke nke atọ sitere na ezinụlọ Kim na -achị achị. Ọ bụ obodo na -ebi na socialist gara aga: ụlọ ọrụ steeti, ugbo mkpokọta na ndị agha na -ewe nnukwu ego.
Banyere ọdịbendị, n'agbanyeghị na enwere mmetụta doro anya nke ndị China, nke bụ eziokwu bụ na ọdịbendị Korea n'ozuzu ya (site na ndịda na ugwu) enwetala ụdị pụrụ iche nke na ọbụnadị ime ihe ike nke ndị Japan mere n'oge ọrụ ahụ enweghị ike ihichapụ. Ugbu a, n'ime afọ na -esote ntọhapụ, ndị South Korea malitere inwe nnukwu mmekọrịta na ụwa ebe ndị North Korea malitere imechi onwe ha.
Yabụ, ọ bụrụ na South Korea bụ mba anyị ugbu a, North Korea alaghachila n'ọdịbendị ọdịnala, nwere ọtụtụ ụdị ndị mmadụ ha enwetawo ume ọhụrụ.
Njem na North Korea
Anyị kwenyere na ọ bụghị ihe a na -ahụkarị n'ụwa ime njem nlegharị anya na North Korea. NA ụfọdụ ndị enweghị ike ozugbo mee ya, dịka ọmụmaatụ, ndị America, South Korea ma ọ bụ ndị si Malaysia. Ndị ọzọ n'ime anyị nwere ike ịga, mana na -agbaso usoro.
Nke mbụ, ị nweghị ike ịga na ugwu korea n'onwe gị. Naanị site na onye na -ahụ maka njem onye ga -eme ndoputa n'aha gị na ọbụna hazie visa, bịanye aka na nkwekọrịta, nye gị otu nkwekọrịta ahụ maka paspọtụ gị.
Tupu enwe mmachibido siri ike mana maka oge ị ga -esonye, ​​ha adịghị umeala, ha na -arịọkwa gị ka ị kọwaa aha ụlọ ọrụ ị na -arụ ọrụ na ya. Mana kpachara anya, ọ bụrụ na site na ohere ị na -arụ ọrụ na mgbasa ozi ma ọ bụ ọgbakọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka ikike mmadụ, enwere ike na ha agaghị enye gị visa.
Mgbe niile ọ na -ebu ụzọ aga China na visa North Korea nwere ike ịnata ebe ahụ. Ụlọ ọrụ ahụ ga -akọwa nke ahụ. Ihe dị mma, a ga -enwerịrị ihe dị mma, bụ na ọ bụghị gị na -eme usoro a n'ụlọ ọrụ nnọchite anya obodo.
Ha nwere ike tinye stampụ paspọtụ gị na kọstọm dịka ha nwere ike ghara. NA visa anaghị aga na paspọtụ mana iche. Ị ga -anapụta ya mgbe ị na -ahapụ obodo a. Ị chọrọ idobe ya dịka ihe ncheta? Ọ dị mma idetuo ya, ọ na -aka njọ mgbe niile ịjụ onye nlegharị anya ma ị nwere ike ịme ya ma ọ bụ na ịnweghị. Ọ bụ ihe amamihe ka ị ghara ịgha ụgha.
Banyere nhọrọ ndị dị na njegharị, ọ dị mma ịmara na ị ga -enwe ike ịhụ karịa isi obodo, Pyongyang. Ị nwere ike gaa Rason, mpaghara akụ na ụba pụrụ iche, ị nwere ike ịgba ski na Masik, rịgoro ugwu kachasị elu nke bụ Paektu Mountain ma ọ bụ gaa emume mmemme.
Ee ị nwere ike see foto. A na -ekwu na ha agaghị ahapụ gị, mana ọ bụghị eziokwu ma ọ bụ opekata mpe kpamkpam. N'ịbụ onye nwere uche, ịrịọ onye ndu gị yana ịmeghị ihe ngosi foto ga -ekwe omume. Ma o doro anya, ọ dabere na ebe ịnọ na onye ma ọ bụ ihe ịchọrọ ịse foto.
A naghị anabata ndị njem nleta iburu akwụkwọ ma ọ bụ CD ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri ya, ọ gaghị abụ ihe na -emetụta omenala nsọ North Korea. Na otu ahụ na -arụ ọrụ n'ụzọ ọzọ, na -ewereghị "ihe ncheta." Recapping a bit, Kedu ebe m nwere ike ịga na North Korea?
Pyongyang ọ bụ ọnụ ụzọ. Ị ga -ejegharị n'ámá na n'ámá nwere ọtụtụ ihe oyiyi. Njem a bụ nke ndọrọndọrọ ọchịchị n'obodo a n'ihi na ị gaghị ahapụ obodo na -enweghị ezigbo onyonyo onye ndu. Mgbe ahụ, ị ​​ga -ahụ ihuenyo ahụ Kumsusan Obí nke Anyanwụ, ihe ncheta nke otu tọrọ ntọala, Kim II-sung Square, Arc de Triomphe, na Mausoleum nke Kim II-sung na Kim Jong-il ma ọ bụ ihe ncheta Mansu Hill.
Gafere ụgbọ ala kwa ị nwere ike ịga njem na metro, ihe ga -ekwe ndị mba ọzọ ohere naanị kemgbe afọ 2015, ma ọ bụ igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ ịzụ ahịa. Nke ahụ bụ ihe na -atọ ụtọ karịa na enweghị mgbagha, agaghị echefu echefu. Mgbe, Ebe ọzọ bụ Rason, Mpaghara Mpaghara Pụrụ Iche. Ọpụrụiche pụrụ iche, naanị ebe ndị ọchịchị Kọmunist na -enye ohere ụfọdụ ọkụ ọkụ ikekete. Ọ bụ obodo dị nso na oke ala ya na Russia na China.
Masik bụ ebe a na -eme ski. Nke a bụ Masikryong Ski Resort, saịtị nke ezigbo ọkọlọtọ n'ihe gbasara mbuli elu, akụrụngwa na ebe obibi. Na ọtụtụ ụlọ mmanya na ụlọ nri karaoke. Ị nwere ike ịrị mita 1200 wee nwee ọ enjoyụ narị kilomita nke mkpọda ugwu.
Chongjin bụ obodo nke atọ kachasị na North Korea ọ bụkwa obi nrụpụta ya. Ọ dị anya ma na -anabata ndị ọbịa ole na ole Ma eleghị anya ọ bụ ya mere ị ji amasị ya nke ọma. O nwere oghere etiti nke bụ ebe kachasị adọrọ mmasị ya, yana ihe osise ya nke ndị ndu, doro anya. Na ebe a anyị na -abịa. N'ezie ọ bụghị ọtụtụ ihe ọzọ. N'etiti eziokwu ahụ bụ na ọ bụ mba pere mpe ma nwee nde mgbochi ...
Ọ dị mma, n'ikpeazụ, anyị nwere ike ịkpọ ndị na -eme njem nlegharị anya: Njegharị Koryo (dị oke ọnụ, ọ na -anara ndị njem meworo okenye ọ bụghị ọtụtụ ndị na -eto eto), Njegharị Uri (ha bụ ndị haziri njem Dennis Rodan), Ọrụ Njem Lupine na Juche (ma Bekee), Oké nkume ụzọ njem (dabere na Beijing), Njegharị FarRail na KTG. Ndị a na -adị na weebụ mgbe niile, mana nke na -ewu ewu dịkwa Ntorobịa Pioneer Tour.
Ụlọ ọrụ ikpeazụ a na -enye njem nlegharị anya sitere na euro 500 (ebe obibi, ụgbọ oloko Beijing- Pyongyang - Beijing, nri, nnyefe na ntuziaka, ụgwọ mbata. Ọ gụnyeghị mmefu, mmanya na ndụmọdụ, mana ha na -ahụ maka nhazi visa na tiketi. ụlọ ọrụ ndị a niile na -arụ ọrụ na gọọmentị North Korea yabụ na ọ bụ njegharị ndị ọ haziri.
Na North Korea ị gaghị anọ naanị gị. Ị nwere ike ghara ịga njem n'otu, ee, mana otu oge na ala North Korea, ha ga na -anọ gị mgbe niile, site na mbata gị ruo ọpụpụ gị, site na mgbe ị biliri n'ụtụtụ ruo abalị. Ị nweghị ike ịhapụ ụlọ nkwari akụ ahụ naanị gị, ma ọ bụ gbakụta onye ndu ma ọ bụ ndị otu ahụ azụ, ma ọ bụ tie mkpu, ma ọ bụ gbaa ọsọ, ma ọ bụ metụ ihe oyiyi ma ọ bụ onyonyo nke ndị isi ama ama ama, ma ọ bụ see foto ka ha na -ebepụ isi ha ...
Enweghị ezigbo nkasi obi ma ọ bụ ihe ụtọ, ndụ dị nnọọ nfe, na -akpa oke oke nso n'ọnọdụ ụfọdụ. Enweghị mgbasa ozi n'okporo ụzọ ọha, enweghị ịntanetị, njikwa na -adịgide adịgide. Ọ nwere ike bụrụ na ị gaghị ahụ akwụkwọ mposi ma ọ bụ ncha, ka ị na -apụ apụ n'isi obodo ị na -aga ebe enweghị ọkụ eletrik ma ọ bụ mmiri ọkụ. Ọ bụ otu a, onye ọ bụla na -ekwu na mmetụta nke enweghị ihe ọ bụla na nke na -emeghị eme dị egwu.
Nke bụ eziokwu bụ na njem dị otu a abụghị ịbụ ihe ụtọ ma ọ bụ njem ezumike, mana ọ bụ n'ezie ihe ị na -agaghị echefu echefu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Atụmatụ » Otu esi eme njem na North Korea